Madaxweyne Deni oo xalay la kulmay Guddoonka iyo xildhibaannada Puntland – Kalfadhi
August 23, 2020 August 23, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Deni, ayaa xalay magaalada Garoowe kula kulmay Guddoonka Golaha Wakiilada ee Dowladda Gobolleedka Puntland iyo Xildhibaanada Golaha Wakiilada.
Kulanka oo ay ka qeybgaleen Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Mudane Axmed Karaash iyo Guddoonka Golaha Wakiilada , waxaa uu ku saabsana wadatashi laga yeelanayo xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020/21 iyo aragtida Dowladda Puntland.
Xildhibaannada iyo Madaxweynaha ayaa isku aragti ka ahaa dhammaan qaadacaada shirka, iyagoonna dhaliil xooggan ujeediyay madaxda dowladda dhexe.
Maamuladda Puntland iyo Jubbaland, oo ka maqnaa shirkii Dhuusamareeb saddex ayaa caddeeyay in aysan qeyb ka aheyn, laguna matalin shirka Dhuusamareeb ka dhacay. Waxaa ay sheegeen in ay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhanyahay.
Heshiiskii Dhuusamareeb, ayaa qeexaya in qaabka doorashada 2020/21 noqoto mid Deegan Doorasho ah (Electoral constituency caucuses), isla markaanna Ergada kursi kasta noqoto 301 oo ka imanaysa beesha kursiga wadaagta.